this is test publication by nassir ali - issuu
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hayâ&#x20AC;&#x2122;ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo.
qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii
ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah
Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hayâ&#x20AC;&#x2122;ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda.
Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hayâ&#x20AC;&#x2122;ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha
bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha.
Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda.
Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado
Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada
Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna.
Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu
maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo
qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo
dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
Xafiiska Arimaha Bulshada ee Maamulka Kismaayo oo Lacago Deeq ah Gudoonsiiyay Dad Danyar ah Arbaco, June 03, 2009(HOL): Waaxda Arrimaha Bulshada ee Maamulka Islaamiga ah ee Magaalada Kismaayo ayaa caadiyan waxa ay bil kasta lacago deeq ah guddoonsiiyaan
dad iyagu danyar ah oo aan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. Waxaa maanta la arkayay qaar kamid ah dadkaasi oo ku sii qulqulaya xafiiska arrimaha bulshada ee gudaha Xarunta Magaalada Kismaayo, si ay wax uga soo gaaraan deeqda uu maamulka Kismaayo bixinayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo aan maanta kula kulmay afaafka hore ee xarunta magaalada Kismaayo oo wejigooda laga dheehan karay ku qanacsanaan waxa uu maamulku ugu deeqay ayaa waxa ay ii sheegeen in maamulku bil kasta ay u qeybiyaan Lacago deeq ah, taasi oo ay ku sheegeen in ay wax xoogaa ka tareyso maareeynta noloshooda. Dadkaan oo ah dad aad u danyar intooda badanna ah dadka ka soo barakacay Muqdisho ayaanan iyagu heli jirin kol hore taakulo ceynkaan oo kale ah, marka laga reebo hay’ado Maxalli ah oo horay gobolka uga howlgali jiray kuwaasoo ka saacidi jiray waxyaalo ay ka mid yihiin qutul-duruuriga lagama maarmaanka u ah nolosha. Si kastaba arrintu ha ahaatee dadkii maanta deeqda la siiyay ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen deeqdaan lacageed ee la siiyay iyagoona maamulka ka codsaday in ay sii ballaariyaan mashruucan lacagaha lagu qeybinayo xilli ay jiraan dad badan oo ka soo qaxay dagaallada ka socdo Muqdisho oo aan heysan hoy iyo hanti midna. Hiiraan Online Kismaayo, Soomaaliya
this is test publication
this is a test publications